Ireo vahiny vita vaksiny feno dia afaka mitsidika an'i Sydney manomboka amin'ny 1 Novambra
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafampana Aostralianina » Ireo vahiny vita vaksiny feno dia afaka mitsidika an'i Sydney manomboka amin'ny 1 Novambra
Vaovao Mafampana Aostralianina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Nilaza ny praiminisitra New South Wales fa tonga ny fotoana hisokafana mba hamelomana indray ny toekarena, izay simba tanteraka noho ny fikatonan'ny fanjakana COVID-19 efa-bolana.
Nanidy ny sisintaniny i Aostralia tamin'ny volana martsa 2020 ho valin'ny areti-mifindra COVID-19 manerantany.
Any New South Wales, ny isan'ireo olona nanao vaksiny feno dia nahatratra 77.8%, raha 91.4% kosa nahazo farafahakeliny fatra iray tamin'ny vaksinin'ny COVID-19.
Ny toekaren'i New South Wales dia simba tanteraka noho ny fanidiana COVID-19 efa-bolana.
Nanambara ny praiminisitra New South Wales (NSW) Dominic Perrottet androany fa Sydney dia hisokatra ho an'ireo mpitsidika vahiny vita vaksiny tanteraka, tsy mila quarantine, manomboka amin'ny 1 Novambra 2021.
“Mila miditra amin'izao tontolo izao indray isika. Tsy afaka miaina eto amin'ny fanjakana hermit isika. Tokony hisokatra isika, ”hoy ny mpitarika ny fanjakana be mponina indrindra any Aostralia tamin'ny zoma.
Nanidy ny sisintaniny i Aostralia tamin'ny volana martsa 2020 ho valin'ny areti-mifindra COVID-19, namela ny fidirana saika ho an'ny olom-pirenena sy ny mponina maharitra izay notakiana hiaina quarantine hôtely mandritra ny roa herinandro amin'ny vidin'izy ireo manokana.
Ny praiminisitra Aostraliana Scott Morrison dia nilaza fa tamin'ny fiandohan'ity volana ity dia hiverina ny dia any ampitan-dranomasina raha vantany vao 80% ny olona amin'ny fanjakana iray dia vita vaksiny tanteraka, saingy ho azon'ny Aostralianina am-boalohany ary mila quarantine an-trano.
Any New South Wales, ny isan'ireo olona nanao vaksiny feno dia efa nahatratra 77.8%, raha 91.4% kosa nahazo farafahakeliny fatra iray tamin'ny vaksinin'ny COVID-19.
Na izany aza, nilaza ny praiminisitra NSW fa tonga ny fotoana hisokafana mba hamelomana indray ny toekarena, izay simba tanteraka noho ny fikatonan'ny fanjakana COVID-19 efa-bolana.
"Ny quarantine Hotel, ny quarantine an-trano dia zavatra taloha, manokatra an'i Sydney sy New South Wales amin'izao tontolo izao isika," hoy i Perrottet.
Araka an'i Perrottet, ireo tonga Sydney aloha dia tsy maintsy mampiseho ny porofon'ny fanaovana vaksiny sy ny fitsapana COVID-19 ratsy alohan'ny hidirany amin'ny fiaramanidina mankany Aostralia.
Ny fanesorana ireo fepetra takiana amin'ny quarantine dia hanampy ny dia iraisam-pirenena mankany Aostralia ary azo raisina an-tanan-droa aostralianina an'aliny izay tafatsoaka any ampitan-dranomasina vokatry ny politika. Nisy ihany koa ny quota hentitra momba ny isan'ny toerana misy an'ireo mpivezivezy miverina ao amin'ny quarantine hotely.
Mandritra izany, ny Fikambanana Medical Australia, izay misolo tena ny dokotera ao amin'ny firenena, tamin'ny zoma dia nampitandrina ny famolavolana azy ireo fa ny rafitry ny fahasalamana dia tsy hahavita hiatrika fidiran'ny mararin'ny virus coronavirus aorian'ny fisokafan'ny firenena.